Maxay Tahay Waxyaabaha Cusub ee Twitterku UBADALAYN BADALAYAASHA Ciyaaraha
Axad, Juun 8, 2012 Khamiis, Juun 18, 2015 Andrew K Kirk
Twitter ayaa leh ku dhawaaqay astaamo astaamo cusub oo sare u qaadaya astaamaha goobidda iyo soo saarista labadaba. Hada waad baari kartaa waana laguu muujiyey Tweets, maqaallo, koontooyin, muuqaalo iyo fiidiyooyin khuseeya Kuwani waa isbeddelada:
Saxitaanka higgaadda: Haddii aad ereyga qalad ku qorto, Twitter wuxuu si otomaatig ah u soo bandhigi doonaa natiijooyinka weydiintaadii aad ugu talo gashay.
Talooyinka la xiriira: Haddii aad raadiso mowduuc ay dadku u adeegsadaan ereyo badan, Twitter wuxuu ku siin doonaa talo soo jeedin ku habboon ereyada la midka ah.
Natiijooyinka leh magacyada dhabta ah iyo magacyada isticmaalaha: Markaad raadiso magac sida 'Jeremy Lin,' waxaad arki doontaa natiijooyin sheegaya qofkaas magaciisa dhabta ah iyo magaca isticmaalaha koontada Twitter-ka.
Natiijooyinka dadka aad raacdo: Marka lagu daro aragtida 'All' ama 'Top' Tweets ee raadintaada, waxaad sidoo kale hadda arki kartaa Tweets ku saabsan mowduuc la siiyay oo kaliya dadka aad raacdo.
Intii aan ka argagaxay dadaalka injineernimada, ma sii arki karo astaamaha cusub ee Raadinta & Raadinta ee Twitter-ka oo ah beddelka ciyaarta laba sababood awgood:
1. Cusbooneysiinta Twitter ee Xawaaladda Maskaxda
Maalin kasta, waxaa jira 1 milyan oo akoonno cusub oo Twitter ah oo la abuuray waxaana la soo diraa 175 milyan oo Tweets ah! Xogtan joogtada ah ee warka waa mid weyn, laakiin si fiican iskuma dhiibto raadinta iyo helitaanka. Kaliya kuma quusin tweets mawduucyada qaarkood; halkii, waxaan raadiyaa dad xiiso leh oo aan raaco.
2. Twitter-ka oo lagu dheefshiiday banaanka Twitter.com
Maxaa ka dhigay Twitter mid la yaab leh guul sannadihii hore, waxay ahayd in macluumaadka la abuuri karo, dheefshiidi karo, lana wadaagi karo gebi ahaanba ka gooni Twitter.com. Qoraalkan adag ee 'APIs' wuxuu gacan ka gaystay kicinta tan oo koriin ah. Sida ugu adag ee ay Twitter iskudayaan inay iskudayaan inay dadka ku soo celiyaan Twitter.com, dadku way ku qanacsan yihiin isticmaalka iyo inay arkaan tweets-ka bogagga kale ee saddexaad. Sababtaas awgeed, astaamaha Raadinta & Raadinta ee Twitter ma arki doonaan dad badan oo isticmaala culus.
Hal digniin, injineerka Twitter-ka ee hogaaminaya dacwadda, Pankaj Gupta waa mid karti badan leh; wuxuu diiday dalabyo uga yimid Google iyo Facebook si uu uga shaqeeyo Twitter. Xaqiiqdii wuu caqli badan yahay si uu iigu caddeeyo inaan qaldanahay.
Ku faraxsanahay aqbalida dalabka ka yimid @twitter (raali ahaw @google iyo @facebook, Waan ku jeclahay idinka, laakiin @twitter waa halka aan tegayo…)
Maxay kula tahay Muuqaaladan cusubi ma wax bay ka beddelayaan barta twitter? Fikirkaaga iyo faallooyinkaaga hoos noogu reeb.
Tags: Media Social SuuqTwitterdaahfurka twitterraadinta twitter
Jul 8, 2012 markay tahay 3:32 PM
Had iyo jeer ku raaxeyso inaad wax qorto oo aan kula wadaago dhammaantiin. Waad ku mahadsan tahay dhammaan kooxda Suuqgeynta Teknolojiyada Suuq geynta!
Jul 9, 2012 markay ahayd 4:45 AM
Twitter laftiisa waa baddal ciyaar, dhammaanteen waxaan u isticmaalnaa siyaabo kala duwan welina waxaan isku dayeynaa inaan ka shaqeyno kartida, sida runta ah Twitter iyaga laftoodu. Wax kasta oo lagu daro xulashada raadinta dhibta ayaa la soo dhaweynayaa. Wanaagsan in laga hadlo mowduuca in kastoo aan sidaa u soo dhaweynayo taas, Thanks Paul
Jul 9, 2012 markay tahay 2:10 PM
@ twitter-205666332: disqus Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga! Twitter-ka ayaa beddelaya ciyaarta; waa wax la yaab leh waxa 140 dabeecadood ee cusbooneysiinta loola jeedo bulshada adduunka iyo internetka.
Waxaan u maleynayaa inaad sii arki doontid wax badan, Twitter oo isku dayaya inuu ka kaxeeyo howlo badan qaababka jira, kana soo horjeedo soo saarista astaamo badan.